‘Bangilahlise okwenyongo yenyathi’ | IOL Isolezwe
‘Bangilahlise okwenyongo yenyathi’
Isolezwe / 14 January 2013, 09:53am /
UMHOLI owakhonjwa indlela ku-ANC futhi owayenguMengameli we-ANCYL, uMnuz Julius Malema, ukhala uyazithulisa ngabangani bakhe athi sebamlaxaza abasafuni nokuphendula izingcingo zakhe uma ebafonela.
UMalema uthe usephila ngokuzilimela abheke nezinkomo zakhe epulazini njengoba esefana neqaqa nje.
Ekhuluma nephephandaba i-City Press, uMalema uthe ungafunga ukuthi unesifo sochoko ngendlela abantu abangasamfuni ngayo ngisho nalabo ayesondelene nabo izinsuku zisemnandi.
Uthe ukholwa wukuthi abantu abamshiya ngoba esebunzimeni ngabangani bamanga ababevele bengamfuni kwasekuqaleni kodwa kukhona ababekucuthele.
Uzwakalise ukukhathazeka nangabaholi abangasafuni ngisho ukubonakala behamba naye esidlangalaleni njengoba esephenduke inkomo edla yodwa.
“Uma ngibashayela ucingo abanye bayaziziba izingcingo zami kwesinye isikhathi bazibambe kodwa kube ngabantu abaphuthumayo abangenaso isikhathi sami. Abanye bakhuluma izinto engingazizwa,” kusho uMalema.
Phambilini kubikwe ukuthi uMalema ubhekene nesikweleti sentela esingu-R16 million. Kukholakala ukuthi wakhokha u-R4 million okusho ukuthi angase alahlekelwe yipulazi lakhe lamaklabishi, otamatisi nezinkomo okuyikhona anakho manje.
Ngokusho kwemibiko uMalema wakwamukela ukuthi ukweleta ihhovisi lentela kodwa wakuphika ukuthi wayezama ukukhwabanisa. Kuthiwa wethemba ukuthi kuzofinyelelwa esixazululweni ngalolu daba.
Utshele leli phephandaba ukuthi kumele kuhlonishwe ilungelo lakhe lempilo yasesithe. UMalema uthe akukho mali ayenza ngobugebengu noma wasebenzisa izindlela zobumnyama. Uthe yena akanamfihlo. “Akukho umbuso ongakwazi ngami,” kusho uMalema.
Ubhekene namacala angu-51 okubalwa kuwona inkohlakalo, ukuba nemali eningi okungaqondakali ukuthi wayithola kanjani nokukhwabanisa okuthinta amathenda ayewathola kuhulumeni waseLimpopo.
Kunemibiko yokuthi ayebambisene naye kwezamabhizinisi, uMnuz Lesiba Gwangwa, ubambisene kahle kakhulu nabaphenyi. Kodwa yena uyaphika ukuthi angase ethule ubufakazi obuzogojela uMalema.